"ဘဝသည်လှပသည်" ရုပ်ရှင်မှအကောင်းဆုံးစာပိုဒ် ၃၆ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
“ ဘဝသည်လှပသည်” ရုပ်ရှင်မှအကောင်းဆုံးစကားစု ၃၆ ခု
သင့်မျက်လုံးများကိုငိုစေမည့်ရုပ်ရှင်တစ်ခုရှိပါကထိုရုပ်ရှင်သည် "Life is Beautiful" ။ ဒီရုပ်ရှင်ကအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေတွေမှာတောင်မှအရာဝတ္ထုကောင်းတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ မင်းပတ် ၀ န်းကျင်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဤရုပ်ရှင်သည်နာဇီချွေးတပ်စခန်းများတွင်ရှိနေစဉ်အီတလီ - ဂျူးမိသားစု၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။
ဇာတ်ကောင် Guido သူကသားဖြစ်သူGiusuèmeကိုဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးဟာဂိမ်းတစ်ခုလို့ထင်ပြီးသူတို့ဟာအမှတ်တွေရအောင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်ဖျောက်ပစ်နေတယ်လို့ယုံကြည်စေပါတယ်။ သူတို့ကိုဝိုင်းရံသောကြောက်မက်ဘွယ်သောအဖြစ်မှန်နေသော်လည်း။ မင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိပြီးမင်းကိုမင်းဘဏ္aာတစ်ခုလိုဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာမင်းကိုနားလည်စေမယ့်ရုပ်ရှင်တစ်ခုပါ။ စက္ကန့်တိုင်းအဖိုးတန်သည်။
"ဘဝသည်လှပသည်" ၏ Phrases
ဒီရုပ်ရှင်ဟာမင်းဘဝ၊ ဘဝ၊ သေခြင်း၊ အရာများ၏ရှုထောင့်အပေါ်သင်ထင်ဟပ်စေမည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစကားစုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မင်းရုပ်ရှင်မကြည့်ဖူးဘူးဆိုရင်ဝါကျတွေကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့မင်းဒါကိုမြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခင်ဗျားရဲ့အတွင်းပိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာမတိုင်ခင်နဲ့ပြီးနောက်မှာမှတ်သားထားတာပါ။ ပြီးတော့မင်းကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်၊ ဤဝါကျများကိုဖတ်ခြင်းသည်သင့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောဘဝသင်ခန်းစာများကိုသတိရစေလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပြောရန်မလွယ်ကူပါ။ ဒဏ္inာရီထဲမှာလိုပဲနာကျင်မှုလည်းရှိတယ်၊ ဒဏ္likeာရီတစ်ခုလိုအံ့သြစရာကောင်းတယ်။
မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမင်းသမီး။ မင်းနဲ့အတူညလုံးအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ် မင်းတို့ရုပ်ရှင်တွေကိုသွားနေတုန်းမင်းကငါအရမ်းကြိုက်တဲ့ပန်းရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတယ်။ မင်းသမီးမင်းသမီးလေးကိုသာငါ ... စဉ်းစားမိတယ်
ငါအများကြီးမြင်သောအရာကို! ငါ့ကိုဒီမှာဘာမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး၊ ငါဒီမှာရှိနေတယ်ငါကမင်းရဲ့ကျွန်ပဲ။
ဒီဟာကဘယ်နေရာလဲ။ တင့်တယ်လှတယ်။ ချိုးပျံသန်းလာတယ်၊ မိန်းမတွေကကောင်းကင်ကကျလာတယ်။ ငါဒီမှာပြောင်းရွှေ့တာ!
အရေးပေါ်ကြေးနန်း။ ငါချက်ချင်းဘာလင်ကိုသွားဖို့လိုတယ် ဒီပန်းတွေကဘာတွေလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရမှတ် ၁၀၀၀ ရရှိခဲ့ပါပြီ။ သံချပ်ကာကားတစ်စီးသည်ရယ်မောရန်သေဆုံးသည်။
ငါ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ဖို့သိပ်မလွယ်ဘူးဆိုတာမင်းမသိသေးဘူးလား။ ချောကလက်ကောင်းတဲ့ရေခဲမုန့်ကောင်းကောင်းနှစ်ခု၊ အတူတူလမ်းလျှောက်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။
မင်းရထားပေါ်မှာဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဘူးလား သူတို့ကအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ လူတိုင်းရပ်နေကြတယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကပ်နေကြတယ်၊ ထိုင်ခုံလည်းမရှိဘူး။
တစ်ချိန်ကမဟုတ်အကြိမ်ရာပေါင်းများစွာသင့်ကိုချစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရူးသွားရင်မှသာမင်းရဲ့အိမ်ရှေ့မှာမင်းရဲ့အိမ်ရှေ့မှာမင်းကိုချစ်လိမ့်မယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်။ ဘဝ
နေကြာပန်းတွေကနေကို ဦး ညွှတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူတို့ကိုအရမ်းတိမ်းစောင်းနေတာကိုတွေ့ရင်သူတို့သေပြီလို့ဆိုလိုတယ်။
မင်းကကောင်လေးတစ်ယောက်ကောင်း အိပ်မက်မက်ပြီးအိပ်မက်လှလှမက်ချင်တယ် ဒီဟာကအိပ်မက်တွေပါ၊ မနက်ဖြန်နို့နဲ့ကွတ်ကီးတွေနဲ့မင်းတို့အမေကငါတို့ကိုနိုးလာလိမ့်မယ်။ နောက်တော့ငါတို့စားတဲ့အခါငါသူမကိုငါခဏခဏသုံးကြိမ်လောက်ချစ်သွားမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆက်မပြတ်အော်ဟစ်အော်ဟစ်နေသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလူဆိုးများအသင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဖြစ်ရပ်သုံးခုတွင်အချက်များအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်။ ၎င်းတို့ဆုံးရှုံးသွားသည်၊ တစ်ခုမှာငိုတော့သည်။ နှစ်ခု, သူတို့ရဲ့မိခင်ကိုမြင်ချင်သူမြား; သုံး, ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းနှင့်ရေစာကိုတောင်းသောသူတို့ကို။
အိုဘုရားသခင်၊ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီဟာမဖြစ်သင့်ပါဘူး နောက်ထပ်ညစာဘယ်မှာလဲ?
ထင်းမီးဖိုကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့သော်လည်းမည်သည့်ယောက်ျားမီးဖိုကိုမျှမတွေ့ခဲ့ပါ။ "ကျွန်တော့်မှာထင်းမရှိဘူး။ ဒီရှေ့နေကိုထည့်လိုက်။ ဒီရှေ့နေကကောင်းကောင်းမလောင်ဘူး။ အဲဒီမီးခိုးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ Ay Josué၊ မင်းဘာတွေပြောနေတာလဲ။ ခလုတ်တွေ၊ ဆပ်ပြာတွေနဲ့ငါတို့ကိုမီးဖိုထဲမှာလောင်ကျွမ်းစေတယ် ...
သင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ငါမင်းသား Guido ဒီမှာအရာအားလုံးငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏ ဤတွင်မင်းသားစည်းမျဉ်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာကိုအက်ဒစ်အဘာဘာလို့ခေါ်မယ် ငါကအားလုံးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ကုလားအုပ်များလာသည်။ တောင်မှအနည်းငယ် hippos ။ ငါသွားရပါမယ်မင်းသမီးနှင့်တွေ့ဆုံမည်
လူတိုင်းလိုချင်တာကိုယောရှုလုပ်တယ်။ သူတို့ကစပိန်တွေ၊ နောက်ပိုင်းတွင်ဆေးဆိုင်တွင်သူတို့သည်တရုတ် (သို့) သားပိုက်ကောင်များကို ၀ င်ခွင့်မပြုပါ။ သူတို့ကသူတို့ကိုမကြိုက်ဘူး။ ငါဘာပြောရမလဲ
ယခုမှာဆိုရင်အမျုိးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများ၊ Grand Hotel မှအံ့ surprise စရာကောင်းလောက်အောင်အံ့အားသင့်စရာပါ။ အဲသယောပိကိတ်မုန့်။
ဒီလူတွေကအရူးပဲ! ဒီဟာကတစ်ရာကီလိုဂရမ်လေးတယ်။ ဒီမှာ ၃၀၀၀ ဒီဂရီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်။ Vittorino၊ ဒါကိုငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူး!
ငါဘာဖြစ်သွားမလဲ အဆိုးရွားဆုံးလုပ်နိုင်တာကကျွန်တော့်ကိုအဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီးအဝါရောင်ခြယ်တယ်၊ ပြီးတော့ဂျူးစားပွဲထိုးပါ။ ဒီမြင်းဟာဂျူးဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။
သဘာဝကျကျ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကသာလွန်တယ်။ ငါတို့ရဲ့လူမျိုးကသာလွန်မြင့်မြတ်တယ်လို့ကလေးတွေကိုပြောဖို့ငါရောမမြို့ကနေထွက်လာတာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့အီတလီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသက်သေပြနိုင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဘာကြောင့်ငါ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။ မင်းကိုပြောမယ်? ငါထက်ပိုပြီးဘယ်သူ့ကိုလှည့်စားမလဲ။ (…) ကျွန်ုပ်သည်အာရီယန်လူမျိုးတစ် ဦး ပါ။
ဒိုရာနဲ့ကျွန်တော်ဟာလမ်းတစ်လမ်းတည်းမှာပဲမွေးဖွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့အတူတူကျောင်းတက်ပြီးသူငယ်ချင်းတွေတူတူပဲ။ ဒိုရာသည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်သူမဘဝ၏လူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နှစ်တွင်လက်ထပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အောက်ပါAprilပြီ ၉ ရက်ကို Santa María del Pellegrino ရှိ Basilica သို့ဖိတ်ကြားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » “ ဘဝသည်လှပသည်” ရုပ်ရှင်မှအကောင်းဆုံးစကားစု ၃၆ ခု
Johnny Deep ၏အကောင်းဆုံး 32 စကားစု